Iwayini 4.8: yini okusha kunguqulo entsha yesendlalelo sokuhambisana | Kusuka kuLinux
Iwayini 4.8: yini okusha kunguqulo entsha yesendlalelo sokuhambisana
I-Wine 4.8 inguqulo entsha entuthukweni ekhishwe ukuthi itholakalele abasebenzisi ukuthi bayihlole. Isendlalelo sokuhambisana kwezinhlelo ze-Unix ezihlose ukwenza isoftware yomdabu ihambisane neWindows iyaqhubeka inganqandeki futhi iqhubekele phambili igxathu negxathu ngenxa yomsebenzi omkhulu womphakathi wonjiniyela. Manje, ngalokhu kukhishwa okusha okuhle kuza nezindaba ezimnandi kakhulu esizophawula ngazo.
Kulokhu iphrojekthi yondla abanye abaningi, njengoba ingasebenzi ku-Linux kuphela, kepha naku-BSD naku-MacOS, lapho isebenza khona naku-Android, njengoba sazi vele. Kepha, njengoba wazi, kukhona amanye amaphrojekthi afaka ukusebenza kwewayini (isb: i-DXVK) noma asuselwe kuwo ukuze asebenze njengoba kwenzeka ku-Valve's Proton yokuletha amagama wemidlalo we-Microsoft Windows ku-Linux nge-Steam Play, noma ubudlelwano React OS, noma isoftware ephathelene nekhokhelwayo yeCrossOver, njll.
Yebo, sishiya ukubaluleka nokusetshenziswa kwewayini, ake sikwenze izindaba ezilethwa yiWine 4.8:
Ukusekela ukwakha ezinye izinhlelo ngefomethi ye-PE.
I-Unicode ivuselelwe ku-Unicede 12.0.
Ukusekelwa kwamafayela we-MSI patch.
Ikhodi engeyona eye-PIC yakha amapulatifomu e-i386.
Ukusekelwa okuthuthukisiwe kwabalawuli njengezinti zomdlalo.
Iziphazamisi eziningana ezivela kuzinguqulo zangaphambilini zilungisiwe.
Ngaphandle kwalezi zinguquko, kukhona namaphutha angama-38 aselungisiwe, futhi manje izimbungulu ezindala ezithinte ezinye imidlalo yevidiyo noma okuvimbe isoftware ngeke kusasihlupha futhi singadlala imidlalo yevidiyo efana ne-Star Citizen, World of Warships, Warframe, Test Drive Unlimited, Gran Prix Legends nezinye izihloko eziningi ngaphandle kwalezo ziphazamiso. Izindaba ezinhle-ke lezi kubadlali abasebenzisa iwayini ukusebenzisa imidlalo engeyona eyomdabu yezinhlelo ze-nix lapho kutholakala khona iwayini.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Iwayini 4.8: yini okusha kunguqulo entsha yesendlalelo sokuhambisana
I-WordPress: Izindikimba nama-plugins ka-2019
Ukukhishwa kweVivaldi 2.5: inguqulo entsha yesiphequluli sewebhu